Siyazi ukuthi ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke futhi okwalandela ngokushintsha kwesimo sezulu amanzi olwandle siya sifudumala futhi dirtier. Lapho-carbon dioxide ne-methane thina ukudedela emkhathini, sibi isimo. Kodwa akulindele ezweni amanzi kungenye inkinga - plastic. kusukela epilweni yangamalanga yesimodeni igcwele le nto, kusukela ukudla emabhokisini ezimotweni. Plastic ngokuphelele yonke indawo, ngisho ulwandle. Ngokusho ucwaningo entsha, 2050 isibalo emhlabeni wonke lamanzi plastic ziyoyidlula inani izinhlanzi.
usongo okusha amanzi emhlabeni
Ngokusho kombiko omusha kusuka Ellen MacArthur Foundation, ezingaphezu kuka-95% emhlabeni plastic ziphonswe, kuyilapho% 5 kuphela uthunyelwa ukuze kusetshenziswe. ukulahlekelwa Economic kusukela ukukhululwa ezifana omkhulu impahla kufika ku- $ 120 kwezigidi eziyinkulungwane ngonyaka. Cishe zonke zepulasitiki ezilahliwe isetshenziswa kanye kuphela. Engamaphesenti angu-40 imfucuza plastic ahlale phezu kwezwe,, kuncike izinga impahla, bangcolise iplanethi amakhulu eminyaka. Kancane abangaphezu kwengxenye yesithathu yabo bonke amapulasitiki ekhiqizwa ngonyaka, kuvela olwandle. ukungcola okunjalo njalo ngeminithi okulingana ukukhululwa egcwele okuqukethwe dumpster olwandle.
Kusukela ngo-1964, epulasitikini ukukhiqizwa liye landa izikhathi ezingu-20. Namuhla ekhiqizwa engamathani ayizigidi ezingu-343 ka impahla ngonyaka. Kulindeleke ukuthi leli nani eminyakeni engu-20 ezayo kuyoba kabili futhi 2050 - ezine, futhi zonke ngoba amazwe asathuthuka sezifuna plastic ezingasho. Udoti esesivele olwandle, angabangela umonakalo ongalungiseki imvelo.
A ezihlukahlukene izinyoni, izinhlanzi nezilwane zasolwandle wabulala ngokuthatha izikhwama zepulasitiki nezinhlayiyana plastic ukudla. Ingozi iba hhayi kuphela plastic, kodwa futhi inani uphethiloli odingekayo ukuze kuvezwe into. Kuyinto 6% wezindleko ukusetshenziswa uwoyela by 2050 share yayo kuzokhulisa 20%.
Umbiko kudinga ukushintsha ngokuphelele ukukhiqizwa, ukusetshenziswa kabusha plastic. Kuze kube manje, engabizi ukudala amathani plastic entsha kuka ukuze bavuselele ubudala. Kunzima ukuthola izixazululo ngempumelelo kule nkinga yembulunga yonke. Nge ukunwetshwa emakethe emazweni asathuthuka ezikhulayo uphoqe sepulasitiki. Omunye isixazululo kungenzeka ukunciphisa ukusetshenziswa kwale nto emaphaketheni kanye ukukhiqizwa ngokuyinhloko ukubola plastic. Kuyadingeka ukuba ufunde indlela ukucubungula inombolo enkulu kunazo zonke zezinhlamvu plastic, noma ulisebenzise ngokuphindaphindiwe.
Charming Uzbekistan inhlokodolobha Tashkent nezinye ubuhle bayo Asian